५ देखि १७ % ब्याजदरमा अटोलोन – कुन बैंक तथा वित्त कम्पनीले कति – ब्याजदरमा दिन्छन् ?
नेपाली नयाँ वर्ष लागेसँगै विभिन्न सवारी बिक्री कम्पनीहरुले आफ्ना प्रोडक्सहरुमा अफर ल्याएका छन् । ग्राहकलाई आर्कषित गर्न नगद छुट, फाइनान्स, एक्सचेन्ज, लयातका विभिन्न योजना ल्याएका हुन्छन् ।
यस्ता योजनामध्ये ग्राहक सबैभन्दा बढी आर्कषित हुने भनेको फाइनान्सका सहज सहुलियत अफरमै हो । जसकारण अधिकांश सवारी साधान बिक्रेता कम्पनीले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरी ग्राहकलाई आर्कषक फाइनान्सियल अफर गरेका हुन्छन् ।
कम्पनीहरुले गर्ने शुन्य डाउनपेमेन्टदेखी लिएर शुन्य ब्याजदरसम्मका अफरमा ग्राहक सजिलै आकर्षित भइरहेका हुन्छन् । तर यस्ता अफरमा आकर्षित भएर फाइनान्समा सवारी साधन खरिद गर्ने कतिपय ग्राहक पछुताउनु समेत परिरहेको हुन्छ । त्यो भनेको फाइन्नान्समा सवारी खरिद गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्त कम्पनीको सवारी साधान कर्जाको ब्याजदर नबुझ्दा नै हो ।
कुनै पनि सवारी साधान बिक्रेता कम्पनीले फाइनान्समा सवारी खरिदका लागि अफर गर्छ भने सबैभन्दा पहिला त्यो कम्पनीले कुन बैंक तथा वित्त कम्पनीसँग सहकार्य गर्छ ? थाहा पाउन आवश्यक छ । त्योसँगै ती बैंक तथा वित्त कम्पनीले सवारी साधान कर्जामा तोकेको ब्याजदर र सोको अवधिसमेत जान्न आवश्यक हुन्छ तर, बैंक तथा वित्त कम्पनीरुले अटो लोनका प्रोडक्टअनुसार ब्याजदर भने फरक–फरक निर्धारण गरेका हुन्छन् आज हामीले कुनै बैंक तथा वित्त कम्पनीले कति ब्याजरमा सवारी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्, सोको जानकारी उनीहरुले सार्वजनिक गरेका र आफ्नो वेवसाइटमा राखेका ब्याजदरको विवरणबाट एकमुष्टमा दिएका छौं ।
२०७८ श्रावण २, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 267 Views